Atombohy amin'ny andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Switzerland
haino aman-jery > Journal succession > 2017-01 mpandimby ny Magazine > Manomboha amin'Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra
Mino mafy aho fa tsara ny hanombohana ny andro amin'Andriamanitra. Andro vitsivitsy dia manomboka amin'ny "Andriamanitra tsara aho!" milaza. Amin'ny hafa dia hoy aho hoe "Andriamanitra tsara rahampitso!" Eny fantatro fa somary efa antitra ihany izany, nefa afaka milaza amim-pahatsorana fa mahatsapa toy izany foana aho amin'izao fotoana izao.
Herintaona lasa izay, ilay vehivavy nozaraiko tao amin'ilay efitrano tamin'ny fihaonambe iray ho an'ny mpanoratra dia mahafinaritra fotsiny. Na inona na inona fotoana natory hatory dia nandany adiny iray fara-fahakeliny ny vavaka na fampianarana Baiboly alohan'ny nanombohany ny androny. Efatra, dimy na enina ora - tsy niraharaha! Nahafantatra tsara an'io vehivavy io aho ary mbola fanaony andavanandro izany. Mifanaraka foana izy amin'izany - na aiza na aiza misy azy amin'izao tontolo izao, na manao ahoana na manao ahoana ny sainy amin'ny diariny amin'izany andro izany. Tena olona manokana izy izay tena tiako be. Nahatsiaro tena ho meloka aho rehefa nilaza taminy fa tsy manahy momba ny jiro famakiana rehefa mifoha izy satria matory amin'ny mazava.
Aza diso hevitra aho azafady! Mino tanteraka aho fa tsara ny manomboka ny andronao miaraka amin'Andriamanitra. Ny fotoana iarahana amin’Andriamanitra amin’ny maraina dia manome antsika hery hiatrehana ny asa amin’ny andro, manampy antsika hahita fiadanana ao anatin’ny fanahiana. Izany dia mamela antsika hifantoka amin’Andriamanitra fa tsy amin’ny zavatra madinika mahasosotra izay ataontsika lehibe kokoa noho ny tena izy. Manampy antsika hifanaraka tsara ny saintsika sy hiteny teny tsara amin’ny hafa izany. Noho izany, dia miezaka manao fotoam-bavaka maraina sy mamaky Baiboly maharitra kokoa aho. Miezaka manao izany aho, nefa tsy tafita foana. Indraindray dia mety ny fanahiko, fa ny nofoko no malemy. Farafaharatsiny izay no fialan-tsiny ara-baiboly6,41). Azonao atao koa ny mahafantatra azy.
Na izany aza, tsy ny zava-drehetra no very. Tsy misy antony tokony hieritreretana fa horavana ny androntsika noho io. Mbola afaka miorina tsara isika ary manaiky an'Andriamanitra farafaharatsiny isaky ny mifoha - na dia mbola mandry ao amin'ny fandriananay mafana aza isika. Tena mahavariana izay fohy hoe "Misaotra tompoko tamin'ny torimaso tsara!" afaka manao amintsika raha mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra isika. Raha tsy natory tsara isika, dia mety hiteny toy izao hoe: "Tsy matory tsara aho androany hariva, tompoko, ka mila ny fanampianao mba hahatongavana amin'ny andro tsara." Fantatro fa namorona ianao androany. Ampio aho hankafy an'io. » Raha tafahoatra izahay dia mety hiteny toy ny hoe "Oh". Tara izao. Misaotra tompoko, matory amin'ny torimaso fanampiny. Ankehitriny dia ampio aho hanomboka ary hifantoka aminao! » Afaka manasa an'Andriamanitra hanana kaopy iray miaraka amintsika isika. Azontsika atao ny miresaka aminy rehefa mitondra fiara any anaty fiara isika. Azontsika atao ny mampahafantatra azy fa tiantsika izy ary misaotra azy noho ny fitiavany tsy misy fepetra. Eritrereto ... Tsy manomboka amin'Andriamani-kafa isika satria manantena izy na tsy faly amintsika Izy raha tsy manao izany isika. Atombohy amin'ny alalàn'ny fanomezam-pahasoavana kely ho an'ny tenantsika ny andro.Izany no mamaritra ny toe-tsaina anatiny ary manampy antsika hifantoka amin'ny ara-panahy fa tsy ny ara-batana fotsiny. Izy io no tokony ho fiheverantsika ny fiainana ho an'Andriamanitra isan'andro. Ahoana no ahafahantsika manao izany raha tsy manomboka ny andro miaraka aminy isika.